Taliya cusub oo loo magacaabay howl-galka midowga Afrika ee Ciidamada AMISOM – Walaal24 Newss
February 1, 2019	2	By walaal24
Taliya cusub ee howl-galka midowga Afrika ee Ciidamada AMISOM ayaa loo Magacaabay ,Jeneraal; Tigabu Yilma Wondimhunegn, oo kasoo jeeda Dalka Itoobiya, kaas oo beddelaya, Jeneraal; Jim Beesigye Owoyesigire, oo xilka hayay tan iyo January 2018.
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, ahna Madaxa guud ee howl-galka Amisom, Francisco Caetano Madeira, ayaa goob-joog ka ahaa munaasabadda xil wareejinta Labada taliye.
Francisco Madeira, ayaa taliyaha cusub kula dardaarmay in ay hortaallo shaqo, wuxuuna sheegay in howl-galku uu yahay mid aad u ballaaran, balse uu si fiican ugu kalsoon yahay inuu kasoo bixi karo waajibaadka ka saaran xoojinta Amisom.
Taliyaha cusub ee Amisom Jeneraal; Tigabu Yilma Wondimhunegn, ayaa leh Khibrad Milliteri oo gaareysa 34 Sano , isagoo xilal kala duwan kasoo qabtay hoggaanka Ciidanka difaaca Itoobiya ee ENDF loo yaqaan.
Bulshada Hirshabeele lagu baraarujinaayo in ay ka qeybgalaan nuucyada kala duwan ee wax soo saarka
Barlamaanka Puntland oo magacaabay Gudiga doorashada Godoomiyaha Barlamaanka
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka oo sheegay xiliga Golaha la horkeenayo Mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari
Dhageyso: Saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo sheegay in la dilay horjooge kasoo jeeda Ruushka
Dhageyso: Sarakiil iyo Ciidamo oo boob kula dhaqaaqay Xerada Tababarka Imaraadka Carabta ee magalada Muqdisho kana tirsanayeen
Daawo: Dabley dil ka geysatay Degmada Wadajir oo Gobolka Banaadir soo Bandhigay
Daawo: Maayarka cusub ee Jigjiga “Nabad galyada uma dulqaadan doono qof Taliskii jabay wali usii durbaan tumeyso”